यस कारण बुहारीहरु बुधवार घर जानु हुँदैन ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / यस कारण बुहारीहरु बुधवार घर जानु हुँदैन ?
admin May 21, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 242 Views
शास्त्रहरूमा हप्ताको हरेक दिन कुनै विशेष कार्य गर्न निषेध गरिएको छ । यसमा दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराका अलावा यात्राका लागि निषेधित वार पनि छ।
Previous स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना दोस्रो स्थानमा, बालेन शाह अग्रस्थानमा नै
Next युवा अवस्थामा नै कम्मर दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरामा सधै ख्याल गर्नु पर्छ, नत्र पछुताउनु पर्ला